Trump oo ku hanjabay burrinta heshiis Obama ka shaqeeyey. - BBC News Somali
Image caption Xiriirka diblumaasiyadeed ee Mareykanka & Cuba ayaa so laabtay sanadkii hore
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa ku goodiyey in uu ka laaban doonno siyaasaddii madaxweyne Obama uu dib ugu soo celiyey xiriirka Mareykanka iyo Cuba marka uu xafiiska la wareego bisha Janaayo ee sanadka fooda inagu soo haya.
Laakiin Trump wuxuu tibaaxay in arrinkaasi uu ku xirnaan doonno sida xukuumadda Shuuciga ah ee Cuba ay ula timaado heshiis wanaagsan oo ay u soo bandhigto dadka Cuba iyo kuwa haysta dhalashada Mareykanka ee ka soo jeeda Cuba.
Madaxweyne Obama ayaa ka shaqeeyay in uu wanaajiyo xiriirka Cuba, arrintaa oo ka soo billaabatay soo celinta xiriirkooda diblomaasiyadeed sanadkii la soo dhaafay kaddib muddo nus qarni ah oo uu xiriirkaasi go'annaa.
MrTrump ayaa ku tilmaamay Fidel Castro kaligii taliye amxaq aharxan oo dadkiisa kadeed u gaystay.
Image caption Barack Obama & madaxweynaha Cuba Raul Castro oo magaalada Havana uga qyab galaya cayaar baseball